fampitandremana: Hadisoana raha nandefa ny pake QUERY. PID = 938 ao /home/admin/web/info-all.com/public_html/wp-includes/wp-db.php amin'ny tsipika 2056
Vaovao sy Fikambanana | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: News and Society
Ny toetoetra mampiavaka ny faritr'i Samara
Ny faritra Samara dia miavaka amin'ny loharanon-karena voajanahary: misy tsangambato voajanahary mihoatra ny 300 ao amin'ny faritany midadasika. Eto no itehirizana ny karazana zavamaniry sy biby tsy fahita firy. Ny harena ankibon'ny tany dia tanterahina amin'ity faritany ity ...
Taratasy fialantsasatra avy amin'ny zanany vavy ho an'ny zanany vavy. Ny taratasy ho an'ny zanakavavy avy amin'ny reny sy ny dadany dia mitovy amin'izany
Misy karazana toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana, ary matetika mitranga fa ny reny sy ny zanaka vavy dia tsy afaka miresaka tsotra, am-po, mampiharihary ny tsiambaratelony sy ny fanahiany. Amin'ity tranga ity, afaka ...
Rostov-on-Don: mponina ao an-tanàna. Ny isa sy ny isan'ny mponina ao Rostov-on-Don
Ny isan'ny mponina ao Rostov-on-Don ankehitriny dia maherin'ny 1 tapitrisa 100 1987. Izy io dia mitana ny laharana fahafolo ao amin'ny lisitry ny tanàn-dehibe rosiana amin'ny isan'ireo mponina. Ny mponina an-tapitrisany dia teraka tamin'ny XNUMX, ...
Ny tantara sy ny famaritana ny volokano Eyyafyatlayokudl
Hatrizay hatrizay dia mampatahotra olona ny volkano ary mahasarika olona. Afaka matory an-jatony taona maro izy ireo. Ohatra iray ny tantaran'ny volkano Eyjafjallajokull farany teo. Mamboly tanimbary eo amin'ny tehezan'ireo tendrombohitra mirehitra ny olona, ​​mandresy ny tampony, ...
7 Febroary. Andro fety sy tantara ara-tantara amin'izao fotoana izao
Araka ny kalandrie gregoriana, ny 7 febroary dia heverina ho andro faha-38 amin'ny taona. Nandritra ny tantara dia maro ny hetsika tsy hay hadinoina tamin'io daty io. Ity no hatokana ity lahatsoratra ity. Andro fanatanjahantena ririnina ...
Vehivavy manankarena ao Rosia: fanombanana
Ny naoty "Vehivavy manankarena indrindra any Rosia" dia navoakan'ny magazine Forbes nandritra ny taona maro misesy. Tamin'ity taona ity dia nahitana mpandray anjara 30 niaraka tamin'ny harena nanomboka tamin'ny $ 60 tapitrisa ka hatramin'ny $ 1 miliara ...
Fetiben'ny kafe tany Shina. Ny zavakanto momba ny lanonana dite
Ny Tea dia manana toerana manokana amin'ny fiainan'ny Sinoa, ary ny fisotroana dite dia lasa zavakanto misaraka amin'ny lanonana dite. Aleon'ny Sinoa dite toy izay zava-pisotro hafa na dia amin'ny fahavaratra aza: ...
Ohabolana momba ny alika. Ohabolana sy teny ho an'ny ankizy
Ny ohabolana sy ny ohabolana dia ampahany tsy azo sarahina amin'ny kolontsain'ny firenena rehetra. Ny sasany amin'ireo ohabolana sy ohabolana ampiasain'ny olona tsy misy fisalasalana. Ka ara-organika dia tafiditra ao anatin'ny lahateny mandre izany izy ireo. Betsaka amin'ireo no fantatra ...
Tsangambato ara-tsarintanin'i Mosko: maoderina sy tantara
Mahatalanjona ny tanànan'i Mosko tsy hoe satria renivohitry ny Tanindrazantsika. Izy io dia nitahiry tsangambato maro an'ny vakoka ara-kolontsaina ao amin'ny firenena. Efa tamin'ny taonjato faha-15, ny maritrano Mosko dia lasa fanehoana ny kolontsaina manerana ny firenena. Maritrano ...
Baobab mistery: hazo fahagagana
Ny hazo baobab tsy mahazatra dia tsy manam-paharoa amin'ny zavatra rehetra: ny habeny, ny refy, amin'ny lafiny androm-piainana. Na ny tahan'ny fahavelomany tena tsara dia ny fitsiriritan'ny zava-maniry rehetra. Hazo mahavariana ny baobab. Izy no solontenan'ny fianakavian'i Malvov malaza indrindra, ...
Iza no sokajy toy izany ary iza no nomena anarana anaram-bosotra?
Nisy fianakaviana manan-tsaina hafa tonga nitsidika, namaky tsara sy nahita fianarana ihany. Nandritra ny fivoriana, toy ny mahazatra, nanomboka niresaka lohahevitra lohahevitra izy ireo, indrindra, momba ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna, ...
Fantatsika ny fihodinan'ny ririnina
Ny fiainan'ny squirrels amin'ny natiora dia mitranga, toy ny fitsipika, any anaty ala. Ny fototry ny sakafo mahavelona ny biby dia ny voan'ny hazo. Izany no antony hipetrahan'ilay sifotra amin'ny ala mifangaro, izay ahafahany mahazo ...
Temitra any Chypre volana maromaro
Ny toeram-pialantsasatra malalaky ny Ranomasina Mediterane - ny nosy Sipra - dia malaza amin'ny morontsiraka tena tsara, ny toetr'andro ary ny toetr'andro mafana. Amin'ny fahavaratra dia mafana be ny rivotra ka ny hafanana any Sipra no manaloka ny marika 35 ° C. Eto ...
Sakafo: famaritana, lava, endriky ny fiainana
Ny lalitra dia ao amin'ny baiko Diptera, izay misy karazany dimam-polo amby zato sy iray hetsy mahery eto amin'izao tontolo izao. Ary vitsivitsy amin'izy ireo ihany no mitondra ny otrikaretina, raha ny ankamaroany kosa tsy dia manimba, toy ny lolo. De maninona ...
Ahoana no fehy ny nononao - fomba sy torohevitra
Ny fampinonoana nono dia iray amin'ireo fomba fampijanonana ny lactation ampiasain'ny vehivavy izay te-hamindra ny zanany amin'ny sakafo artifisialy. Saingy tsy azo antoka ity fomba ity. Raha tsy hainao ny mamehy ny tratranao ary inona ...
Razoarina "Chic": ny fenitry ny kalitao, ny fahamendrehana ary ny prestige
Ny olon-drehetra dia manonofy fiharatra madio sy madio nefa tsy may, manapaka ary mahasosotra. Ny fiharatra araka ny tokony ho izy dia zavakanto mila fanatsarana. Ny anjara asa lehibe ao anatin'izany dia an'ny zavamaneno. Ankehitriny ...
Loharano azo havaozina sy tsy azo havaozina - fampiasana maharitra. Departemantan'ny harena voajanahary
Ny harena voajanahary dia manan-danja lehibe amin'ny fiarahamonina. Izy ireo dia miasa ho toy ny loharano lehibe amin'ny famokarana ara-nofo. Ny indostria sasany, indrindra ny fambolena, dia miankina tanteraka amin'ny harena voajanahary. Manokana ...
Fitaovana miaramila ao amin'ny tranombakoka ao Moskoa sy Moskoa (sary)
Any Mosko, ny olon-drehetra dia afaka mahita toerana manintona maro ho azy. Ny fitaovan'ny miaramila any amin'ny tranombakoka any Moskoa dia mahaliana ny mpitsidika. Ny fampirantiana hatramin'ny andron'ny Ady Lehibe Tia Tanindrazana ka mandraka ankehitriny dia aseho. ...
Inona no karazan-tsakafo natoraly? Fiompiana sy fiompiana karp
Ny fianakaviana karpa dia manana trondro karpa volafotsy mahavariana. Noho ny fomba fiainany any an-tsekoly sy ny lanjany avo lenta dia nanjary tian'ny mpanjono maro izy. Izany no mahatonga azy ireo mandinika akaiky ny fahazarany sy ny sariny ...
Fifaninanana tonga lafatra. Ohatra amin'ny fifaninanana tonga lafatra
Ny fanatsarana ny famokarana, ny fihenan'ny vidin'ny famokarana, ny fandefasana automatique ny fizotrany rehetra, ny fanatsarana ny firafitry ny orinasa - izany rehetra izany dia fepetra lehibe iray amin'ny fampandrosoana ny orinasa maoderina. Inona no fomba tsara indrindra ahafahan'ny orinasa manao izany rehetra izany? ...
pejy 1 pejy 2 ... pejy 79 Next Page
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 586,429.